लोकतन्त्र उल्ट्याउने प्रयास भैरहेको छ : काँग्रेस नेता पौडेल
प्रकाश बम, डोटी । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकारले लोकतन्त्र उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए । नेपाली काँग्रसले मंगलबार दिपायलमा आयोजना गरेको बृहत आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । मुलुकको नयाँ संघिय लोकतन्त्रीक गणतन्त्र माथि खतरा देखा परेको र लोकतन्त्र उल्ट्याउँने सडयन्त्र भैरहेकोे बताउँदै उनले मुलुकमा नेपाली काँग्रसले लोकतन्त्र उल्ट्याउँने कुनै पनि सडयन्त्र सफल हुन नदिने बताए । लोकतन्त्रको अपहरण हुन नदिन देशै भर जागरण अभियान शुरु गरिएको उनको भनाई थियो । उनले कम्युनिष्ट सरकारको विकल्प नेपाली काँग्रेस मात्रै रहेको जिकिर समेत गरे ।
सरकारले पक्षपाती, मनोमानी शासन संचालन गरी मुलुकलाई निरंकुशता, कम्यूनिष्ट अधिनायकबाद तिर लगेको आरोप लगाउँदै नेता पौडेलले शासकको नियतमा खोट भएको बताए । ‘अपराधिहरु राजनीतिक संरक्षणमा छन् । अपाराधीहरु कानुनको दायरामा आउँदैनन् नेता पौडेलले भने,‘अख्तियार निरिह छ । अदालत पुलिस प्रशासन निरिह छ तसर्थ कम्यूनिस्टहरुले देश चलाउँन सकिरहेको छैन । यो सरकार असफल भएको छ ।’ बर्तमान सरकार भ्रष्टाचारको संस्था बिकास तर्फ उन्मु भइरहेको भन्दै यसका पछाडी नेकपाको पार्टी लागेको उनले आरोप लगाए ।
दुइ वटा टाउको भएको पार्टीले देशमा काम भन्दा कुरा मात्र गरेर देशलाई द्वन्द्व तर्फ धकेली रहेको बरिस्ठ नेता पौडेलले आरोप लगाए। देश संकटमा पर्दा पार्टीले देशलाई बचाउन लागीरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस डोटीका पार्टी सभापति प्रदीप देउवाको अध्यक्षमा भएको आम सभा कार्यक्रमलाई पुर्ब मन्त्री तारिणी चतौत, नेबि सघका पुर्ब अध्यक्ष केसब सिंह , सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य भरत खड्का लगायतका नेता कार्य कर्ताले सम्बोधन गरेका थिए ।
नेता पौडेलले काँग्रेशका स्व. नेता अर्जुन सिंह कठायतको सालीक अनावरण समेत गरेका छन् । २००७ देखि बनारसमा विपि संगै राजनीति शुरु गरेका नेता कठायत दिपायल सिलगढी नगरपालिका २ मा १९९१ मा जन्मिनु भएको थियो । सालिक अनावरण गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले ११ पटक जेल जीवन विताएका स्व. नेता कठायतले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि ठुलो योगदान पु¥याएको बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, जेठ १५, २०७६, ०९:०५:००
पूर्णता पायो बेलौरीका १० ओटै वडामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वडा कमिटीले
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेशको युवा संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्षमा कुलै राज उपाध्याय
मीन कुवँरको अध्यक्षतामा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेशको बेलौरी नगर समिति गठन
गाउँमा सिंहदरबार होईन, भ्रष्टाचार पुगेको छ : कांग्रेस नेता हुमागाँइ मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकार माथिको ‘कु’